Sheekada Carruurnimada Allan Saint-Maximin Plus Xaqiiqda Untold Biography
Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Faransiiska Sheekada Carruurnimada Allan Saint-Maximin Plus Xaqiiqda Untold Biography
Cusboonaysiinta ugu dambeysay April 15, 2020
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta oo leh naanaysta "Saint Max". Sheekadeena Carruurnimada oo lagu daro Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold Biovidence wuxuu kuu keenayaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin caan ah laga soo bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda.
Nolosha iyo Sare u qaadista Allan Saint-Maximin. Dhibcaha Sawirka: Taariikhda Sare, 90Min, Twitter iyo GetFootballNewsFrance
Falanqaynta waxay ku lug leedahay noloshiisii ​​hore / asalka qoyskiisa, waxbarashadiisa / mustaqbalkiisa shaqo, noloshiisii ​​hore ee xirfadda, jidkii caannimada, kacitaanka sheeko caan ah, nolosha xiriirka, nolosha shaqsiyadeed, xaqiiqooyinka qoyskiisa, qaab nololeedkiisa iyo xaqiiqooyinka kale ee aad looga yaqaan ee ku saabsan isaga.
Haa, qof walbaa wuu ogyahay in Saint-Maximin inay tahay wax ka duwan, jaakad ku jirta santuuqa xawaaraha, xirfadiisa iyo khiyaanadooda garoonka ay ka farxiyaan taageerayaasha kubada cagta. Si kastaba ha noqotee, kaliya dhowr qof ayaa tixgeliya Allan Saint-Maximin's Biography oo ah arrin aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Sheekada Carruurnimada Allan Saint-Maximin iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold - Asalka Qoyska iyo Nolosha Hore
Bilaabidda, magacyadiisa buuxa waa Allan Irénée Saint-Maximin. Wuxuu ku dhashay maalinta 12th ee Maarso 1997 hooyadiis, Nadège Saint-Maximin, iyo aabihii Alex Saint-Maximin ee Châtenay-Malabry, oo ah kommuun ku taal koonfurta-galbeed ee Paris, France.
Sida walaalihiisa kale; Thomas Lemar, Thierry Henry, Dimitri Payet iyo Kingsley Coman, ninka Faransiiska ah ayaa iska leh Qowmiyada Guianese Creole ee Faransiiska oo leh xididdada qoyska ee Carribean iyo Koonfurta Ameerika. In kasta oo uu ku dhashay Faransiiska, Saint-Maximin wuxuu asalkiisu ka soo jeedaa wadamada Guyana (dhinaca hooyadiis) iyo Guadeloupe (dhinaca aabihiis).
Isagoo u dhashay waalid hodan ah wuxuu Saint-Maximin siiyay bilow wanaagsan oo nolosha ah. Wuxuu ku soo barbaaray asal qoys heerkiisu sareeyo wuxuuna aad ugu fiicnaa caruur ahaan. Allan Saint-Maximin waalidkiis waxay lahaayeen waxbarashadda ugu wanaagsan dhaqaalaha weligoodna kuma dhibtoonin lacagaha. Ma ogeyd?… Hooyadiis ayaa mar qabatay jagada 'agaasimaha waxbarashada'Iskuul caan ah oo ku yaal xaafadaha magaalada Paris halka aabihiis Alex uu ka ahaa xafiiska maamulaha jaamacada Paris Diderot oo ku taal Paris, France. Labada waalidba waxay ku barbaarinayeen carruurtooda si ay u hoggaansamaan caqiidada diinta Masiixiga.
Sanadaha Hore: Allan Saint-Maximin waxaa lagu soo koray isagoo ugu yar seddex carruur ah. Wuxuu leeyahay walaal ka weyn oo la yiraahdo Kurtys iyo gabar walaasheed ah oo aan magaceeda la shaacin waqtiga qoritaanka. Isagoo ku koray magaalada Meudon, da 'yarta Saint-Maximin waxay dhaaniska iyo moodada u adeegsadeen hiwaayadaha. Habkaas moodada ah ee nolosha wuxuu u arkay isaga inuu u egyahay qaab eg oo timaha lagu xardho, horumarin ilaa iyo maanta.
Allan Saint-Maximin jacaylka ay u qabaan gogosha madaxa ma aha wax cusub. Sawir caruurnimadiisii ​​ayaa dhamaa. Dhibcaha: DailyMail
Sheekada Carruurnimada Allan Saint-Maximin iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold - Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Waalidka Saint-Maximin iyo macallimiinta iskuulka waxay siinayeen dhamaan qiimayaasha loo baahan yahay si uu uga dhigo mid heer sare ah inta uu sii koray. Waqti ka dib markii uu ahaa gabar yar oo dugsi dhigata, Allan waxaa hooyadiis siisay 10 euro markasta oo uu guriga uga tago. Wuxuu ku kharash gareeyay iibsiga nacnaca iyo wuxuu taageeraa saaxiibadiisa baahan (Calaamad deeqsinimadiisa hore). Intii uu ku jiray iskuulka, kartida Saint-Maximin ee ciyaaraha fudud iyo kubbadda cagta ayaa la ogaaday isaga oo sii adkeeyay naftiisa isaga oo aan lahayn tababare ama lataliye. Isaga oo arrimahaas ka hadlaya, wuxuu mar yidhi;
“Awooddeyda ayaa si dabiici ah iigu timid. Waxaan kubbad ku qaatay meel kasta, dugsiga, guriga, iwm. Waan ciyaari jiray kubbadda cagta wakhti kasta inkasta oo aan lay tababarin. Waxay ahayd qaabkeyga, sida aan u doonayey. Dhaqdhaqaaqkeyga iyo xirfadaheygu iskood baa loo bartay ”
Dhammaan xulashooyinka isboorti, Waxay ahayd ciyaaraha fudud oo markii ugu horreysay uga mahadceliyay kartidiisa dabiiciga ah ee orodka taasoo tan iyo caruurnimadiisii ​​ahayd. Markii dambe, wuxuu dalbaday ciyaaraha fudud ee Kubadda Cagta wuxuuna bilaabay inuu ciyaarta la ciyaaro walaalkiis ka weyn, Kurtys oo xilligaas damacsanaa inuu noqdo kubadsameeye. Bilowgii, Saint-Maximin wuxuu ku aaminay xirfadihiisa, horumarin ka dhigtay inuu rumeysan yahay inuu leeyahay karti uu xirfadda ku sii wadan karo.
Isagoo ku dhejinaya walaalkiis, howlgalka koowaad ee Saint-Maximin wuxuu u noqday isaga inuu barto sida waxyaabaha aan caadiga aheyn loogu sameeyo kubada cagta. Wuxuu ku sameeyay intaas oo dhan isagoo ka taagan magaca dadka badan ee xaafadiisa- oo ah meelaha fursadaha kubbadda cagta ay xaddidan yihiin. Maalinba maalinta ka dambaysa, ninka Faransiiska ahi wuxuu bilaabay inuu xirfadiisa ku dhajiyo dusha sare iyo sidoo kale cawska. Saint-Maximin wuxuu la ciyaaray wiilal da'diisu tahay walaalkiis (labo ama saddex sano jirkiisa).
Xawaaraha aan caadiga ahayn ee Saint-Maximin oo ay weheliso xirfadaha jilicsanaanta ayaa aragtay inuu ka sarreeyaa wiilasha kale ee xaafadiisa. Kubadda cagta oo inta badan aan la aqbalin ayaa nasiib u yeeshay inuu fursad u helo tijaabooyin uu la galo Verrières-le-Buisson, oo ah naadiga maxalliga ah. 34 min wadista iyo 10.8km oo ka yimid qoyskiisii. Waqtiga Labada walaalo (Kurtys oo ahaa kii ugu horreeyay) waxay ku guuleysteen gelitaanka akadeemiyada, farxadda Saint-Maximin's Xubnaha qoyska runtii xuduudo kuma lahayn.
Sheekada Carruurnimada Allan Saint-Maximin iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold - Nolosha Mudnaanta Hore
Markii uu da 'yaraa, Saint-Maximin wuxuu xirfadiisa ku soo bartay naadiyada dhalinyarada Verriere-le-Buisson bilo yar ka hor inta uusan u dhaqaaqin koox kale, US-Ris-Orangis taas oo ahayd dheeraad 55 min baabuur wadid / (34.5 km) gurigiisa oo ku yaal Meudon. Markii uu joogay naadiga, waxaa daryeelay laba aqoonyahan, Jean-Louis Lessard iyo Didier Demonchy. Saint-Maximin wuxuu ka hoos ciyaaray halyeeygii macallinkiisa Frédéric Ferreira muddadii uu X-XXX sano jiray.
Sida dad badani filayaan, wuxuu ku bilaabay bilow wanaagsan mustaqbalkiisa. Saint-Maximin aad ayuu ugu farxay inuu daawado sababta oo ah muuqaalkiisa joogtada ah ee xawaare iyo xirfado. Bandhigeedu wuxuu arkay isaga oo u sii gudbay akadeemiyada ujeedooyinka badan ee Faransiiska ee loo yaqaan ACBB (Athletic Club de Boulogne-Billancourt) sanadkii 2007.
ACBB ma ahayn oo keliya dugsi tacliin, laakiin waxay ahayd astaan ​​isboorti halkaasoo Dhamaan waalidiinta ay rabeen inay ku qoraan carruurtooda. Tani waxay sabab u aheyd in akadeemiyadda ay sumcad ku lahayd sameynta ciyaartoydeeda kooxaha ugu sarreeya Faransiiska. Hatem Ben Arfa, Yacine Bammou, in magacooda laakiin in yar ayaa ka gudbay naadiga.
Sheekada Carruurnimada Allan Saint-Maximin iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold - Waddada Weyn
Markuu Saint-Maximin ku soo koray isagoo da 'yar, wuxuu bilaabay inuu ku riyoodo inuu ka ciyaaro Premier League. Xilligaas ka dib, wiilka Faransiiska ayaa daawanayay Arsenal Thierry Henry maalintii oo dhan telefishanka.
Isagoo ka shaqeynaya himilooyinkiisa, xiddigii yaraa wuxuu sii waday inuu sameeyo wixii uu had iyo jeer ku fiicnaa garoonka ciyaarta- Isaga oo ku muujinaya hadalladiisa iyo sida xawaare u socda. Isaga oo sharraxaya midnimadiisa ka dhex jirta labadiisa lamaane, Saint-Maximin ayaa mar yidhi;
Akadeemiyada, waxay ku tababaraan, hal taabasho, labo taabasho. Qof kastaa wuu arkay in si kala duwan laygu soo koray. Wax badan waan kaqaybiyay waxaana la ii sheegay in aan ka horimaado wiilal waaweyn oo xoog badan. Waxaan bartay sida loo garaaco, isla mar ahaantaana, Aviod oo la harraado ”
Macalinkiisa waqtigaas, Guillaume Sabatier, kooxdiisii ​​ayuu ku dhisay. Ciyaartiisii ​​ugu horeysay ee tartan, Allan Saint-Maximin wuxuu sameeyay aragti isagoo dhaliyay goolal 8. Waxaa loo arkaa ifafaale markii uu yaraa, wuxuu sumcad weyn ku dhex yeeshay shaqa-qorista dhammaan France. Si dhakhso ah, Saint-Maximin wuxuu qaatay go'aankii ugu weynaa ee mustaqbalkiisa ciyaareed markii uu ku soo biirey Saint-Étienne, naadi u ogolaatay inuu ku wareego meel aamin ah xaga qalin jabinta sanad dugsiyeedka 2013.
At Saint-Étienne B, Saint-Maximin wuxuu noqday mid ka mid ah ciyaartoydii ugu fiicnaa, horumarna wuxuu ka helay xasilkiisii ​​qarankiisii ​​Faransiiska. Nasiib darrose, inaad ku soo biirto kooxda waa weyn ma arag kooxdii faransiiska ee heshay waqti ku filan oo ciyaar lagu ciyaaro. U dhaqaaqistii Monaco sidoo kale ma shaqeynin maadaama Saint-Maximin keydka uusan fariisan karin Bernardo Silva, Anthony Martial iyo João Moutinho kuwaas oo ugu sarreeyay awoodaha ay leeyihiin.
Sheekada Carruurnimada Allan Saint-Maximin iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold - Kusoo caan bax
Ku guurista amaahda Naadiga Sportiga Naadiga Bastiais wuxuu noqday wadada ugu aaminka badan ee Saint-Maximin, mid aan kaliya bixin BUT ayaa ka dhaadhiciyay Nice inuu ka soo saxiixdo Monaco xagaagii 2017.
Dhanka Nice, Saint-Maximin wuxuu bilaabay inuu sameeyo guulo halis ah, wuxuu fure u noqday kooxda ka hoos shaqeysa Patrick Viera. Qaab ciyaareedkiisii ​​kooxda ayaa soo jiitay macalinka kooxda Newcastle United Bruce kaas oo raadinayay qof ku farxi kara taageerayaashiisa, taasoo ka dhigaya inay ka fadhiistaan ​​kuraastooda.
Riyada Saint-Maximin ee Horyaalka Premier League ayaa ugu dambeyntii suurtagashay kadib markii uu ku soo biiray kooxda Newcastle 2nd ee August 2019. Isla markiiba galay 2019 / 2020, ciyaartoyga is-moodeliska leh oo leh midab bunni ah, spiky dreadlocks ayaa bilaabay taageerayaal xiiso badan. Saint-Maximin wuxuu helay qalbi difaacyada Premier League isagoo ku tartamaya gooldhaliyayaasheeda weerarka xoogan.
Allan Saint-Maximin ayaa isla markiiba noqday taageerayaasha loogu jecel yahay xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay ee Premier League. Astaanta Sawirka: DailyMail
Markasta oo Saint-Maximin uu kubbadda la jiray, waad ogtahay waxa uu sameyn doono maroojin, leexleex, fiiq, u leexleex, kaaftoon kuwa ka hor yimid oo horay u sii orda oo kubbadda lugta ku dheggan. Joojinta isaga ayaa ah arin kale oo gebi ahaanba sida laga soo xigtay caddeymaha muuqaalka fiidiyowga ee hoosta ku yaal.
Daawashada fiidiyowga kore, waxaad aqbali doontaa in Saint-Maximin yahay, shaki la'aan, 'JACK ' sanduuqa. Wuxuu caawiyaa awoodiisa foosha xun iyo khiyaanadiisa (gudcurka madow iyo caddaankiisa), garabka xoogga leh wuxuu sidoo kale leeyahay xaddi badan oo tamar u baahan in lagu sameeyo soo kabashada talismanic. Hoos waxaa ku yaal gabal caddayn muuqaal ah.
Waqtiga qorista, Saint-Maximin shaki la'aan waa ciyaaryahanka ugu muhiimsan kooxda Newcastle waana mid ka mid ah ciyaartooyda ugu xiisaha badan ee laga daawado Premier League. Shaki la'aan, taageerayaasha kubada cagta guud ahaanba waxay qarka u saaran yihiin inay arkaan da 'yarta ubaxeysa oo ku soo kordhineysa xirfado heer caalami ah oo indhaha ka muuqda. Inta kale, sida ay yiraahdaan, waa taariikh.
Sheekada Carruurnimada Allan Saint-Maximin iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold - Nolosha Xiriirka
Isaga oo caan ku noqday caannimada, waxaa hubaal ah in inta badan taageerayaasha Newcastle ay aheyd inay ka fekeraan bal inuu Allan Saint-Maximin run ahaantii guursaday iyo inuu weli qabo xaaskiisa ama uu leeyahay saaxiib. HAA! Ma jirto wax dafiraya xaqiiqada ah in quruxdiisa muuqaalka ay weheliso qaab ciyaareedkeeda ciyaarta ay ka dhigeyso liiska liisaska saaxiibbada wannabe.
Sida laga soo xigtay WTFoot, Ninka Faransiiska ah ayaa mar lagu eedeeyay inuu shukaansaday gabadh la yiraahdo Margaux oo ku dhawaad ​​2015 ah, muddadii uu la joogay kooxda Jarmalka (Hannover 96) Sida ay sheegayaan wararka, Margaux (sawirka hoose) hadda waxa uu noqonayaa saaxiibkiisii ​​hore.
Allan Saint-Maximin ayaa mar la sheegay inuu shukaansanayo Margaux. Astaanta Sawirka: WTFoot
Waqtiga qoraalka, Allan Saint-Maximin waxaa lagu barakeeyey laba gabdhood oo qurxoon (Lyana iyo Ninhia) oo uu ugu yeerayo amiiradiisa. Sida hoos ku xusan, geesaha saxda ah ee timaha gabdhaha labadaba waa muuqaal saafi ah oo ka muuqda muuqaalka aabahood iyo u ekaanta. Sawirka bidix waa quruxsan Lyana (bidix) iyo Ninhia (midig) madaama ay ku raaxeysanayaan raaxada raaxada leh ee aabbahood weyn.
La kulan Allan Saint-Maximin Gabdhihiisa - Lyana iyo Ninhia. Astaanta Sawirka: TheTimesUK
Sheekada Carruurnimada Allan Saint-Maximin iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold - Naftaada Shaqsiga
Inaad baratid Allan Saint-Maximin Nolosha Shaqsiyadeed ee ka fog dhammaan khiyaanooyinka iyo khiyaanooyinka garoonka dhexdiisa waxay kaa caawin doontaa inaad aragti wanaagsan ka hesho shakhsiyaddiisa.
Bilaabidda, halkaas runti aad bay uga badan yihiin xirfadiisa, dahabka iyo sumadaha naqshadaha. Haa !, waxaad u maleyn kartaa inuu yahay uun cilladaysan. Laakiin Saint-Maximin runtii waa nin caqli badan iyo qof caadi ah oo yaqaan waxa uu sameynayo taas oo ah; dadka kale hortiis saaray. Isaga oo la hadlaya BBC, Saint-Maximin wuxuu adduunka ka ogaaday rabitaankiisa inuu wax walba ku sameeyo garoonka dhexdiisa, taageerayaasha ku qoslo, ka caawi asxaabta kale xitaa inaad la micno tahay inaadan goolal dhalin. Hoos waxaa ku yaal gabal caddayn muuqaal ah.
Hal bil ka dib markii ay ku biireen kooxda Newcastle, taageerayaasha England ee Waqooyiga Bari jacaylkooda waxay u qaabeeyeen qaabab ay ku maamuustaan ​​xiddiggooda - horumarintiina waxay ku dhasheen aflagaado. Saint-Maximin wuxuu heesaha caan ku yahay magaciisa - kaas oo aan loogu heesin kaliya inta lagu jiro ciyaaraha laakiin meel kasta oo ay ku jiraan naadiyada. Hoos ka dhagayso;
Taageerayaal badan, haysashada ciyaartoy faraxsan oo xiiso badan sida Saint-Maximin jiilkan ayaa ah wax qurux badan oo la arko. Isaga, shaki la'aan, waa qof la jeclaan karo, oo ah waaliddiinta Newcastle ee raba in carruurtoodu ku daydaan markay weynaadaan. Saint-Maximin wuxuu kasbaday ixtiraam badan taageerayaasha yar yar taas oo dad badani ay ku xusuusteen heestiisa, iyagoo gabyaya u heesta.
Sheekada Carruurnimada Allan Saint-Maximin iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold - Nolosha Qoyska
Sida wakhtigii qorista, Allan Saint-Maximin wuxuu qalin jabiyay taariikh nololeedkiisii ​​hore ee ku aadan dhanka qalinleyda isaga oo uga mahadcelinaya xirfadiisa kubada cagta. Waalidkiis waxay sameeyeen dadaalo taxadar leh si ay uga fogaadaan dareenka warbaahinta. Diiwaanka xaaskiisa, walaashiisa iyo xubnaha reerkiisa ayaa wali ah mid qarsoon. Waxay u badan tahay inay haystaan ​​xilliyadii ugu fiicnaa noloshooda taas oo ay ugu wacan tahay in mid iyaga ka mid ahi uu yahay superstar. Kurtys oo aan kubad sameeye sameynin ayaa haatan u ah la taliye mustaqbalkiisa walaalkiis ka yar.
Saint-Maximin wuxuu ku raaxeysanayaa marka xubnaha qoyskiisa ay sadaqo siiyaan sadaqooyinka. Ma ogeyd?… Mid ka mid ah waxyaabihii ugu horreeyay ee uu qabtay markii uu yimid Tyneside wuxuu ahaa in la aqbalo casuumaad iyo in loo diro NUFC Taageerayaasha Raashinka Cuntada- oo ah meel ka tarjumeysa saboolnimada ku soo food leh ballaaran ee Waqooyiga Bari England. Dadaallada warbaahintu waxay si weyn ugu xirnaayeen gabdhihiisa; Lyana iyo Ninhia intii ay ku tabaruceen.
Sheekada Carruurnimada Allan Saint-Maximin iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold - nololeedka
Barashada qaab nololeedka Allan Saint-Maximin waxay kaa caawinaysaa inaad hesho sawir buuxa oo ku saabsan heerka noloshiisa.
Ku kasbashada qiyaastii € 2,000,000 sanadkii mushahar usbuucii ah oo ah € 38.462 (waqtiga qorista) hubaal wuxuu ka dhigayaa nin kubada cagta ah - daliil u ah qaab nololeed raaxo leh. Kubbad sameeyaha-miyir-qabka wuxuu ku raaxeysanayaa qaab nololeed qurux badan oo si fudud lagu arki karo sedan raaxo leh oo lagu qiimeeyo $ 151,600 (Mushaharkiisa laba toddobaad iyo badh ah).
Gaariga Allan Saint-Maximin
Sidoo kale qaab nololeedka, yaniga iyo anigu waan ogahay in Saint-Maximin leedahay dareen faneed weyn sida lagu arkay garoonka ciyaarta. The Nin Faransiis ah ayaa ah nin kacsan, oo jecel inuu muuqaal qurux badan uga muuqdo garoonka dhexdiisa iyo banaankiisaba. Sida la arkay muddadihiisii ​​hore, tabarucayaasha ku deeqa qaasatan (gaar ahaan timo-goynta) dharka ayaa ah muuqaalkiisa saxiix ilaa maalmihii hore.
Hab-nololeedka Allan Saint-Maximin maanta ma uusan bilaaban. Astaanta Muuqaalka: Instagram
Sheekada Carruurnimada Allan Saint-Maximin iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Waxaa loo sheegay inuu daboolo Mashiinka Naqshadeeyayaasha Madaxa: Ma ogeyd?… Xiddiga Newcastle Allan Saint-Maximin ayaa mar lagu qasbay inuu daboolka ka qaado madaxa '180 Gucci madaxa isagoo wata' STICKER inta lagu gudajiray guushii ay ka gaareen Manchester United si looga fogaado inuu jabiyo sharciyada kafaala qaadida. Intii lagu jiray daqiiqaddaas, ciyaartoyga khiyaanada lahaa wuxuu ku dhejiyay gabal cad oo ka duuban astaanta Gucci.
Allan Saint-Maximin waxaa lagu qasbay inuu daboolo madaxiisa '180 Gucci headband' marka uu ku ciyaaro garoonka. Astaanta Sawirka: TheSun
Allan Saint-Maximin Tattoo loogu talagalay taageerayaasha: Lahaanshaha Tattoos-ka Superhero loogu talagalay ma ahan taageere suuxsan. Muuqaalka Allan Saint-Maximin wuxuu arkay isaga oo helaya saldhig faneed superhero ah. Taageerayaasha aadka u adag ee sidan oo kale ah (hoosta) ayaan ka fiirsan doonin inay jacaylkooda muujiyaan iyagoo si joogto ah jidhkooda uga helay tattoo oo wejigiisa.
Muxuu Jadwalka joogtada ah wuxuu u eg yahay: Allan Saint-Maximin waa qof shaqaaleeya Istaraatiijiyad Shaqo oo gaar ah si loo helo oo uu qaab kusocdo. Kubbada cagta casriga ahi wuxuu adeegsadaa qaab aan caadi aheyn oo lagu sameeyo shaqada-banaanka. Saint-Maximin wuxuu doorbidayaa inuu dib u ordo oo uu ku xoojiyo jaranjarada si qaas ah oo uu naftiisa ugu ilaaliyo.
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay Akhriskayaga Taariikhda Caruurnimada Allan Saint-Maximin Plus Xaqiiqda Untold Biography. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxsanaan iyo cadaalad. Haddii aad hesho wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya xagga hoose. Waxaan markasta qiimeyn doonnaa oo xushmeyneynaa fikradahaaga.
Sheekada Carruurnimada Odsonne Edouard Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nolosha ee Untold
Sheekada Carruurnimada Jean-Philippe Mateta Plus Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Dayot Upamecano Taariikhda Carruurnimada iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Ibrahima Konate Sheekada Carruurnimada Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Dan-Axel Zagadou Taariikhda Carruurnimada oo lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold
Sheekada Carruurnimada Boubakary Soumare iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Lys Mousset Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin
Sheekada Carruurnimada Neal Maupay Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Moussa Dembele Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Antoine Griezmann Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
Wissam Ben Yedder Sheeko Waalidiin Sheeko Xaqiiqo Weedho Wanaagsan
Sheekada Carruurnimada Clement Lenglet iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Soo Gudbin
Taariikhda wax laga beddelay: Juun 16, 2020
Dimitri Payet Sheeko Xeeldheer Xogta Weriyeyaasha